Waaheen Media Group » “Nolosha Maraykanka ee aan ku Noolahay Waa mid Qalafsan” Khadijo Cabduqaadir
Browse:Home Radio Waaheen “Nolosha Maraykanka ee aan ku Noolahay Waa mid Qalafsan” Khadijo Cabduqaadir	“Nolosha Maraykanka ee aan ku Noolahay Waa mid Qalafsan” Khadijo Cabduqaadir
Comments Off on “Nolosha Maraykanka ee aan ku Noolahay Waa mid Qalafsan” Khadijo Cabduqaadir	Khadijo Cabduqaadir waxay ahayd 15 sano jir markii laga qaaday xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, lana geeyay magaalada New York ee dalka Mareykanka.
Waxay Dalka Mareykankan ku tagtay si sharci ah.
Hadda waxay dhigataa jaamacad ku taalla Syracuse, waxaana dhowaantan lagu qasbay inay markale qaxdo. Waxay ka guurtay dhismaha Jaamacadda ka dib markii ardeyad ay qol isla wadaageen ay jeejeexday Kitaabkeeda Quraanka. Waxayna baalasha kibaatka ku daadisay musqusha.
Khadijo waxay sheegtay in nolosha New York ay is bedeshay tan iyo markii la doortay Donald Trump.
Waxaa qorshaha Trump qeyb ka ahaa in magaalooyiinka waaweyn laga suuliyo “qoxootiga sharcidarada ah oo halkaas isku qariya”.
Magaalooyiinka qadiimiga ah ee waaweyn ee Mareykanka waxaa ka mid ah, New York, San Francisco, Washington iyo Chicago.
Donald Trump wuxuu sheegay in magaalooyiinkaas uu dhaqaalaha ka jaridoono haddii ay sii wadaan megengelinta qaxootiga.
Laakiin Maayaro badan ayaa gaashaanka u daruuray amarkiisa waxayna difaaceen dadka ku nool magaalooyiinkooda.
Khadijo waxay Mareykanka ku gashay si sharci ah, balse waxay sheegeysaa in nolosha magaalooyiinka waaweyn ay muhiim u tahay dhammaan qaxootiga raadinaya inay ku nabad galaan Mareykanka.
“Magaalooyiinka waaweyn waxay muhiim u yihiin qofkasto sababtoo ah ma ogeyn waxa siyaasadda iska badalaya,” ayey Khadijo u sheegtay BBC Newsbeat.
“Halkan si sharci ah baan ku joognay, mana aynaan ogeyn waxa is bedelidoono.”
Khadijo waxay tilmaamtay in saaxiibadeeda wadada lagu hadiday ka hor intuusan maamulka is bedelin.
Hadda, dhaqanka wuxuu noqday mid aad u qalafsan tan iyo markii Trump uu ku guuleystay doorashadii 2016-kii, sida ay Khadiijo sheegtay.
Waxay aaminsan tahay in madaxweynaha iyo warbaahinta taageera ay masuul ka yihiin xumeynta muuqalka qaxootiga.
Khadijo waxay sidoo kale aragtaa in wanaag ku wajahan qaxootiga uu jiro muddoyiinkan dambe.
“Waa fursad wax lagu baro laguna wacyigeliyo,” ayey tidhi.
“Waxaa suuragal ah in dadka ay noqdaan kuwa maskax ahaan furan marka ay la kulmaan qof qaxooti ah sideydoo kale. Qof guul gaaray oo dadka dhexgalay, qof saameyn ku leh bulshada”.
Khadijo waxay xaqiijisay inay yaabtay markii mid ka mid ah dadkii qolka ay isla deganaayeen ay ayada ku soo jeesatay, qofkaas oo ay horey uga wada hadleen inaysan ayada u arkin qof ka mid ah dhibaatada qaxootiga.
“Ma rumeysan in quraanka aan aniga aaminsanahay in musqusha lagu dhex daadiyay,” ayey tidhi.
“Wax badan ayaa si isku mid ah u dhacaya – halka dadka ay ku weerarayaan, dowladda ku weerareyso, madaxweynaha hal dhinac la jiro, dadkana hal dhinac ay taageerayaan. Waa aamini waayay.”
Waxay BBC Newsbeat u sheegtay in booliska aysan ka hadlin arrinta markii ay ku wargelisay in tallaabadaas ay tahay neceyb, ka dibna waxay ka guurtay dhismaha jaamacadda, waxayna ku noqotay qoyskeeda.
“Ma dareemaayo inaan ku nabadgalayo ardeyda dhexdooda. Waxkastoo ay sameysay, waxay ku wajahneyd diinta iyo aniga, balse ma hubo”, ayey tilmaamtay.
Khadijo waxay baraneysay cilmiga Xiriirka Caalamiga ah, waxayna rajeyneysay inay ku noqoto xerada qaxootiga ee ayadoo yar laga soo kexeeyay. Madaxweyne wuxuu ku hanjabay inuu masaafurinayo qaxooti badan oo dalkaasi Mareykanka ku nool. Sida cad, hadalkaas ayaa Khadiijo ka careysiiyay.
“Waxaan dareemayaa sida qof caadi ah oo bini-Aadam ah, waa in aynaa isu eegin midka warqadaha haysta iyo kan aan warqadaha haysan”, ayey tidhi.
“Qaxootiga waxay doonayaan meel nabad ah oo ay ku noolaadaan”.
Laakiin waxay hoosta ka xariiqday, “haddii Mareykanka uu diido inuu qaxootiga ku qaabilo gudaha Mareykanka, si sharci ah ama si aan sharci ahayn, marka waa inay qaadaan tallaabo ay dibadda ugu caawinayaan”.
Filed in: Radio Waaheen, Videos, Waaheen News About Waaheen Media